GreenKhabar – गोदावरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय केन्द्र बनाउँछौं -सिलवाल
in आलेख/विचार / हरित वार्ता — by GreenKhabar —	May 5, 2017
गोदावरी नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार श्यामकृष्ण सिलवालसँगकाे कुराकानी :-
गोदावरी नगरपालिकामा तपार्इंले जित्ने आधार के हो ?
– एमालेको नीति, सिद्धान्त र संगठन अरू सबैभन्दा स्तरीय र जनतामा स्थापित छ अर्को कुरा एमालेले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अडानले स्वाभीमान र राष्ट्रिय एकतामा पु¥याएको योगदान हो । जनताले नीतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्छन् भन्ने विश्वास छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हिजो हामीले स्थानीय स्तरमा विकासका काममा गरेको योगदान र विकासको मोडल पनि हो । मेरो आफ्नो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा २०५४ सालमा गोदावरी गाविसको अध्यक्ष हुँदा जुन मोडलबाट विकासको सुरुवात गरिएको थियो त्यसका आधारमा विकासमा फड्को मार्ने भिजन र तदारुकता हाम्रो टिमसँग भएका कारण पनि हाम्रो विजय निश्चित छ ।
० गोदावरीको गाविसअध्यक्ष छँदा गरेका राम्रा कामहरू के–के थिए त ?
– मेरो मान्यता त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आर्थिक पारदर्शिता र शून्य भ्रष्टाचार हो । त्यो विश्वास हिजो पनि देखाएको थिएँ । २०५४ अघि विकासको काम केही नभएको सन्दर्भमा खानेपानी, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, शिक्षालगायतका काममा अत्यन्तै न्यून बजेटमा पनि धेरै काम गरेका थियौं । अहिले हामीले द्रुत गतिमा विकास गर्ने भिजन सहित तयारी गरेका छौं ।
० चुनाव जितेपछि के–के गर्नुहुन्छ त ? के छन् योजना ?
– जनप्रतिनिधिविहिन हुँदा लामो समयसम्म जनताको गुनासोको विषय बनेको प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, अत्याधुनिक र प्रभावकारी बनाउने गरी प्रशासनिक सुधारको योजना छ जसबाट आमनगरवासीले सहजै स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । भूगोलको हिसाबले धेरै टाढाटाढासम्म रहेका दुर्गम क्षेत्रहरूलाई नगर बसको व्यवस्थापन गरेर यातायातको सुविधा दिन्छौं । स्तरीय स्वास्थ्य सेवासहितको मोबाइल क्लिनिकको व्यवस्था गर्छौं । रोग लाग्नै नदिने र लाग्नासाथ उपचार गराएर स्वस्थ नगर बनाउने काममा लागेर सुखी नगरवासीको सपना बोकेका छौं । करमा आधारित अर्थव्यवस्थाका कारण आमनागरिकमा परेको बोझ घटाउँछौं, उद्योग र व्यवसायलाई उत्साहमूलक ढंगले सहयोगका रूपमा योगदान गर्ने गरी स्रोतको वृद्धि गर्छौं । उत्पादनमूलक अभियानलाई बढाएर परनिर्भरताको अन्त्य गर्छौं ।
० परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने के छन् त योजना ?
– कृषि, प्राकृतिक स्रोतसाधन र पर्यटनमा आधारित सम्भाव्यताको खोजी गरेर त्यसको व्यावसायिक विकास स्थानीय नागरिकहरूलाई नै मालिक बनाएर गर्छौं । यसबाट स्थानीय नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था निकै सबल बन्छ । यहाँको पानीको समस्या समाधान गरेर प्राकृतिक रूपमै केही जलाशय निर्माण गरेर प्राकृतिक जलभण्डार बढाउन लाग्नेछौं । एक वर्षमा सबै नगरवासीको घरमा खानेपानी, अर्को एक वर्षमा प्रशोधित खानेपानी सम्पूर्ण घरमा उपलब्ध गराउनेछौं । पाँच वर्षमा सयौं तालतलैयासहितको विश्वस्तरको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौ । देवीचौर डुकुछाप ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो । देवीचौर डुकुछापलाई पर्यटन र कृषिमा आधारित सबल वडा बनाउँछौं । दीर्घकालीन रूपमा देवीचौर सबैभन्दा सक्षम वडा बन्छ । बागमतीको पानी लिफ्ट गरेर कृषिमा प्रयोग गर्छौैं । देवीचौर र लेलेजस्ता ठाउँहरूलाई सहरको नजिकको आवासीय स्थानका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । लेले मल्लकालीन सहर हो । मल्ल राजाहरूको दरबार भएको स्थान हो । ठेचो, ठैव र लेलेमा दरबार स्क्वायरकै ढाँचामा बनाएर पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्नेछौं । चापागाउँलाई केन्द्र बनाएर विकास गर्ने अभियानमा सुरुदेखि नै लागेकाले चापागाउँलाई व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकास गर्ने र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्नेछौं ।
० रोडा, ढुंगा खानी र ईट्टा भट्टा व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
– उद्योग र वातावरणलाई सन्तुलित ढंगले लैजाने सोच छ । वातावरणलाई मात्रै ध्यान दिइयो भने उद्योग बच्दैन र अर्थतन्त्र एवं रोजगारी धराशायी हुन्छ । उद्योगलाई मात्रै ध्यान दिइयो भने वातावरणमाथि असर परेर क्रमशः मानवीय जीवनशैलीदेखि सामाजिक प्रभाव पर्छ । यो नगर क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण उद्योगधन्दाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै वातावरणीय प्रभाव कम गर्दै व्यवस्थित गर्दै जाने कार्यक्रम छ । त्यो खालको प्रविधि भित्र्याएर काम गरिन्छ । उद्योग र समुदायका बीचमा द्वन्द्व नहुने गरी काम गरिन्छ । स्थानीय उद्योगको उत्पादनमा आधारित निर्माणजन्य सामग्रीहरूमा ५० प्रतिशत छुटमा नगरवासीले पाउने व्यवस्था गर्छौं ।
० अन्य नमुना कामहरूको केही योजना छ ?
– बालबालिकाहरूका लागि नगरभित्र अत्याधुनिक चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गराउँछौं । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विश्राम गर्न नगरभित्र दिवा विश्राम घरको व्यवस्था गर्नेछौं । युवापुस्तालाई लक्षित गरेर पर्यटकीय क्षेत्र र पार्कहरूलाई युवा भावनाले माग गरेको ढाँचामा विकास गरिनेछ । प्रेमीहरूले प्रेमको स्मरणमा वृक्षरोपण गर्नेदेखि अन्य स्मरणीय कामहरूको सन्दर्भमा आधारित स्मृति पार्कहरूलाई व्यवस्थापन गरिनेछ । नगरपालिकाको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सभाहल र नगरको सम्पूर्ण सूचनाहरूको केन्द्रका रूपमा नगर सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।